पुजा र सुदर्शनको फिल्म बाट तिन नायक हिट, आकाश अघिल्लो फिल्ममा होलान् त फिट ?
गफगाफ- नेपाली सिने क्षेत्रमा अब्बल निर्देशकका रुपमा हेरिने नाम हो सुदर्शन थापा । उनै सुदर्शन थापाले निर्देशन गरेको पछिल्ला फिल्महरु प्राय सबै सफल नै छन् । सुदर्शन निर्देशित फिल्महरु जति सफल छन्,त्यो भन्दा धेरै फिल्मका नायकहरु सफल हुने गरेका छन् । सुदर्शनले निर्देशन गरेको सफल चलचित्र ’प्रेम गीत’ले जती चर्चा पायो त्यो भन्दा धेरै पुजा शर्मा र नायक प्रदिप खड्काको जोडीको चर्चा भयो । तर यो जाडी धेरै दिन सम्म एकै साथ टिक्न सकेनन् । प्रेम गीतमा दर्शकले राम्रै रुचाएका थिए पुजा र प्रदिपको जोडीलाई । तर त्यस पछि दर्शकले यस जोडीलाई एकै साथ देख्न पाएका छैनन् । प्रेम गीतको सफलता पछि यसको टिममा नै उतार चडाप आयो र टिम नै २ किनारा लाग्यो । त्यो भन्दा ठुलो कुरा पुजा र प्रदिपको सम्बन्धमा नै पानी बाराबारको अवस्था रहेको चर्चा हुने गरेको छ सिने नगरीमा । तर उनिहरुको सम्वन्ध जस्तै भए पनि पुजा र प्रदिप दुबैका निम्ति चलचित्र प्रमगीत लक्की सावित भयो ।
निर्देशक थापाले निर्देशन गरेको अर्को फिल्म हो ’म यस्तो गीत गाँउछु’ । यस फिल्ममा पुजा शर्मा र पल शाहको जोडी बाधियो । प्रदिप पछि पुजाको जोडीको रुपमा देखिएका पललाई पनि दर्शकले रुचाए । यो जोडीको चर्चाले पनि सिने नगरीमा राम्रै स्थान पाएको थियो । दर्शकले फेरी पनि अर्को चलचित्रमा पुजा र पलको जोडीलाई हेर्ने चाहाना दर्शकको थियो । तर हाल सम्म पनि दर्शकको त्यो चाहाना चाहानामै सिमित छ । हाल सुदर्शनकै निर्देशनमा बनेको चलचित्र ’रामकहानी’ प्रदर्शन रत छ । चलचित्रले औषत व्यापार गरे पनि चलचित्रका मुख्य कलाकार आकाश श्रेष्ठ र पुजा शर्माको जोडीलाई दर्शकले औधि रुचाएका छन् । याँहा सम्म की पुजा र आकाशको जोडीलाई रिलमा मात्र सगै हैन रियल जोडीको रुपमा हेर्न चाहाने दर्शकहरु धेरै छन् ।
उनिहरुले मुखै खोलेर रियल जोडी बन्न आग्रह गरिरहेका छन् । प्रदर्शन रत चलचित्र ’रामकहानी’ ले नायक आकाश श्रेष्ठलाई राम्रै हाईप दिई रहेको छ । अब दर्शकहरुले फेरी प्रश्न गर्न थालेका छन, कतै आकाश र पुजाको सम्वन्ध पनि प्रदिप र पलको जस्तै हुने त हैन ? यो जोडीलाई अर्को चलचित्रमा फेरी पनि एक साथ देख्न पाइन्छ या पाइदैन ? त्यस्को उत्तर भने समयले नै बताउने छ । तर सुदर्शनले बनाउने अर्को चलचित्रमा आकाश अटाउलान त ?
हेर्नुस पुजा, आकाश र सुदर्शन सँगको कुराकानी स्